Ibsa Suuratu Al-Qiyaamah-Kutaa 6 - Ibsaa Jireenyaa
January 1, 2020 Sammubani Leave a comment
Yeroo darbe haala nama du’ee ilaalle turre. Har’as itti fufuun du’aan dura hojii fi amala nama kaafiraa qorannoo fi jazaatti isa geessu ni ilaalla.
“(31)–Hin dhugoomsine, hin salaanne. (32)-Garuu kijibsiisee garagalee. (33)-Ergasii boonaa gara maatii isaa deeme. (34)– Badin siif haa ta’u! Ammas badiin! (35)-San boodas badiin siif haa ta’u! Ammas badiin!” Suuratu Al-Qiyaamah 75:31-35
1ffaa-Gooftaa isaa irraa Ergamaan mu’jizaa (raajii) fi mallattoolee ifaatiin gargaarsifamuun isatti dhufee jira. Akkasumas, Ergamaan Qur’aana ragaalee dhugaa eenyullee jalaa dheessu hin dandeenyee of keessatti qabate isatti fidee jira.
-Garuu namni kuni waamicha Rabbii fi Ergamaa Isaatiif hin awwaanne (deebii hin laanne). Waamichi kuni waamicha namni kufrii keessaa gara iimaanatti bahuun qalbiin isaa ittiin jiraattu fi azaaba jalaa nagaha ittiin bahuudha.
-Ammas namni kuni Rasuula (Ergamaa) hin dhugoomsine, Qur’aanaa fi ragaalee of keessatti qabates hin dhugoomsine. Oduu Guyyaa Murtii, du’aan booda kaafamu, qorannoo fi jazaa hin dhugoomsine. (Asitti “hin dhugoomsine” jechuun “hin amanne” jechuudha.)
“Hin dhugoomsine” kana jechuun waamicha amanti haqaa (Islaamaatiif) hin awwaanne, wanta Ergamaan Rabbii (SAW) fidetti hin amanne. (Qur’aanaa fi Guyyaa Qiyaamaa ilaalchisee odeefannoo Qur’aanni of keessaa qabutti hin amanne.)
Yaada kamiyyuu ilaalchisee dhaabbata sadiitu jiru, lamaa miti.
Garuu kaafirri of tuulu, badii hojjatu fi fedhii lubbuu hordofu kuni faallaa wanta Ergamaan Gooftaa isaa ittiin dhufe qabate. Wanta itti amane ilaalchise ragaa Gooftaa isaa biratti akka uzrii (sababaatti) dhiyeefatu osoo isa bira hin jiraatin Ergamaa Gooftaa isaa faallesse.
Kanaafu, Ergamaa Rabbii ni kijibsiise, Qur’aana Rabbii Injifataa, Ogeessa ta’e irraa bu’es ni kijibsiise. Odeefannoo Guyyaa Murtii fi wanta Ergamaan Gooftaa isaa irraa fide hunda ni kijibsiise. Adabbii akeekachiifame akka salphaatti ilaale.
Kuni kan agarsiisu namni kuni gadi dhaabbannaa jiddu-galeessaa gadi dhaabbachuun haqa hin qoranne. Kana irra, faallaa kana hordofuun takkamaan kijibsiise garagalee deeme. Ergaa Gooftaa isaa irraa dhufe yoo shakke dirqamni isarra jiru gadi dhaabbate itti yaadu fi ragaa barbaadudha. Garuu inni kijibsiisee garagalee deeme.
“Garagalee” haqa irraa wanta isatti dhufe fudhachuu dide, dugdan naanna’uun garagalee deeme, ni fagaate. Amanuu waan dideef, kufrii waan fudhateef, fedhii qullaa fi hasaasa sheyxaanaa waan hordofeef Gooftaa isaa faallessuun garagalee deeme.
4ffaa- Erga kijibsiisee fi garagalee deeme of tuuluun isaa qoma isaa keessa guute. Of jajaa fi boonaa gara maatii fi namoota isaa deeme.
Yatamaxxaa- kana jechuun kan of jajuu, of tuuluu, haqa faallessuu fi mormuu isaatiif of ol guddisu, nafsee fi sammuu isaa kan dinqiisifatu ta’e harka isaa lamaan diriirsa. (Jecha gabaaban yatamaxxaa jechuun of jajuu fi boonudha. Jechi yatamaxxaa jedhu, hundeen isaa “ceem’uu irraa kan ka’e diriirfachuudha.” Namni kuni nama gara haqaatti isa waamu irraa ni ceem’a. Of jajuu irraa kan ka’e akka waan dugda isaa diriirsuu fi micciiruti.)
Keewwanni tuni immoo adabbii isarratti murteefamu of keessatti qabatti. Kana aayan tunniin lamaan ni agarsiisti: “Badin siif haa ta’u, ammas badiin! San boodas badiin siif haa ta’u! Ammas badiin!”
“Badiin siif haa ta’u, ammas badiin! San boodas badiin siif haa ta’u! Ammas badiin!”
Kana jechuun osoo lubbuun jirtuu badiin siif haa ta’u, yommuu duutus badiin siif haa ta’u. San booda Guyyaa kaafamtus badiin siif haa ta’u, yeroo ibidda seentus badiin siif haa ta’u. (Asitti jechi“awlaa” hiika “badii” jedhu qaba.)
Hiikni biraa aayah tanaa: azaaba (adabbii) zalaalamitiin murtiin si irratti mirkanaa’e. Murtii kana hojii irra oolchun sitti dhiyaate. (Asitti jechi “awlaa” jedhu hiika “dhiyaachu” qaba.)
Namni kaafirri haqa Gooftaa isaa fudhachuuf fedhii hin qabne, amaloonni fi hojiiwwan armaan gadii irraa mul’atu
✏Qalbiin haqa Gooftaa isaa irraa dhufetti hin amanu.
✏Gooftaa isaatiif gadi hin jedhu. Kana irra,
✏Haqa ni kijibsiisa
✏Osoo haqatti hin xinxalliin takkamaan qaaman garagalee deema. Sababni kanatti isa geesse,
☛Gooftaa isaatiif gadi jechuu fi Ergamaa hordofu irraa of tuuluu, nafsee fi sammuu ofii dinqisiifachu, abboota wallaalummaa fi jallinna irra jiran akkeessudha. Kanaafu, namni yakki armaan olii irratti mirkanaa’e, adabbii Gooftaa isaatiif of saaxila.
 Madda olii fuula 439
 Ma’aariju tafakkuri-2/511-514 (aayaata tanniin ibsuuf barreefamni baay’een kitaaba kanarraa fudhatame)